တစ်ချိန်တုန်းက သူတို့ ဒီလောက် ကောင်းခဲ့ကြသတဲ့ကွယ် . . . . . - SPORTS MYANMAR
တစ်ချိန်တုန်းက သူတို့ ဒီလောက် ကောင်းခဲ့ကြသတဲ့ကွယ် . . . . .
ဟိုး ရှေးရှေး တုန်းက ပေါ့ကွယ်လို့ ပြောရမလား . . . . သိပ် မကြာသေးတဲ့ အတိတ် တုန်းက ပေါ့လို့ပဲ အစပြု ရမလား ၊ လူတိုင်း မှာ ကောင်းမွန် လှပ ချိုမြိန်တဲ့ အတိတ် ဇာတ်လမ်း လေးတွေ ရှိကြ သတဲ့ ကွယ် ဆိုပြီးပဲ အန်တီကြီး လေသံ နဲ့ အစချီ ရမလား . . . ဘယ်လိုပဲ စစ ပါ ။ အဓိက ကတော့ ဒီ အကြောင်းတွေ ကို ပြောဖြစ် ဖို့ ပါပဲ ။ သေချာတာ ကတော့ အဲ့ဒီ အချိန်တွေ တုန်းက သူတို့ ဟာ တကယ်ကို တောက်ပခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲ ကြည့်လိုက် ကြရအောင် . . .
၁ ။ ဟွမ်မာတာ
မာတာ ကို မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဂျာစီ နဲ့ မြင်ပါ များလာ တော့ ဒီ စပိန် သား ဘယ်ကလာ တယ် ဆိုတာ မေ့ပျောက် တဲ့ သူတွေ တောင် ရှိနေ ကြပါပြီ ။ မာတာ ဟာ ယူနိုက်တက် ကို မရောက်ခင် ချဲလ်ဆီး မှာ ကစား ခဲ့ တာပါ ။ အဲ့တုန်းက ဘယ်လောက် ကောင်းခဲ့ သလဲ ဆိုတာ ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် တွေ အသိဆုံး ပါပဲ ။
၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၄ ရာသီဝက် အထိ ချဲလ်ဆီး မှာ မာတာ ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ ချန်ပီယံ လိဂ် ၊ ယူရို ပါလိဂ် တွေ ယူ ခဲ့ ပါတယ် ။ ပွဲပေါင် ၁၃၅ ပွဲ ကစားပြီး ၃၂ ဂိုး သွင်းကာ ၅၈ ဂိုး အထိ ဖန်တီးပေး ခဲ့ ပါတယ် ။ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ တစ်နှစ် တာ အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဆု ကို ၂ နှစ် ဆက်တိုက် ရခဲ့ ပါတယ် ။ အခုတော့ သူမဟုတ်တော့ တဲ့ အတိုင်းပါပဲ ။ စပိန် အသင်းမှာ လည်း သိပ် မစွံခဲ့ ပါဘူး ။ မာတာ ကြည့်ရတာ အနီရောင် နဲ့ ဓါတ် မတည့်ဘူး ထင်ပါတယ် . . .
၂ ။ ရာဒါးမဲ ဖယ်ကာအို
မာတာ က အနီရောင် နဲ့ မတည့်ဘူးလို့ ပြောမယ် ဆိုရင် ကိုလံဘီယာ ကျားကြီး ကတော့ အင်္ဂလန် မြေ နဲ့ ဓါတ် မတည့်သူ လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ပေါ်တို ၊ အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် တို့ မှာ အရမ်း ကြောက်ဖို့ ကောင်းခဲ့တဲ့ ကျားကြီး ( El Tiger ) ဟာ အင်္ဂလန် မြေပေါ် မှာ အသင်း ၂ သင်း ပြောင်း ကစားခဲ့ ပေမယ့် တကယ့် ဖွတ်ကျားကြီး ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဖယ်ကာအို ရဲ့ အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် တုန်းက မှတ်တမ်းတွေ ကတော့ လုံးဝ ကို လက်ဖျားခါ ရ လောက်အောင် ပါပဲ ။ မက်ဒရစ်မြို့မှာ ၂ ရာသီသာ ကစားခဲ့ပြီး ပွဲ ၁၀၀ တောင် မပြည့်ခဲ့ ပေမယ့် ဂိုး 70 သွင်းပြီး ၉ ဂိုး ဖန်တီး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ UEFA Super Cup တုန်းက ချဲလ်ဆီး ကို ၀ုန်းခဲ့တာတွေ က အတိတ် မှာ မှုန်ဝါးသွားခဲ့ ပါပြီ ။
၃ ။ အလက်ဆစ်ဆန်းချက်
အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ကျိန်စာသင့်ခဲ့ သူ လေလား . . . လန်ဒန် မြို့ က အနီရောင် ဂျာစီ ကို ချွတ်ပြီး မန်ချက် စတာ က အနီရောင် ဂျာစီ ကို ပြောင်းဝတ် ခဲ့ ပေမယ့် အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ဟာ အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ဖြစ်မလာ ခဲ့ ပါဘူး ။ ယူနိုက်တက် ကို အမှန်အကန် ကယ်တင်တော့မယ်လို့ ထင်မှတ် ရလောက် အောင် အာဆင်နယ် တုန်းက ဆန်းချက် ရဲ့ မှတ်တမ်းတွေ ဟာ ကြောက်စရာ ကောင်းခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကနေ အာဆင်နယ် ကို ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ က စပြီး ယူနိုက်တက် ဆီ ရောက်မသွားခင် မှာ ဆန်းချက် ဟာ ၁၆၆ ပွဲကစား ခဲ့ ပါတယ် ။ ဂန်းနား အတွက် ဂိုး ၈၀ သွင်းပေး ခဲ့ရုံသာ မက အသင်းဖော် တွေ အတွက် လည်း ၄၅ ဂိုး ရှာဖွေ ဖန်တီးပေး ခဲ့ ပါတယ် ။ FA Cup ၂ ခု သာ ရခဲ့တာ ကြောင့် အသင်းပြောင်းခဲ့ တဲ့ ဆန်းချက် တစ်ယောက် အခုတော့ ဘာဖလားမှ မရဘဲ အင်္ဂလန် ကနေ ပါ ထွက်ပြေး ခဲ့ရပါပြီ ။
၄ ။ ဟင်းနရစ် မစ်ခီတာရမ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ မှာ သိပ်ပြီး မကောင်းခဲ့ ပေမယ့် မစ်ခီတာရမ် ရဲ့ ဒေါ့မွန် အသင်း က မှတ်တမ်းတွေ ကတော့ သင့်ကို မျက်လုံးပြူ စေမှာ အမှန် ပါပဲ ။ အော်ဘားမီးယန်း ၊ ဂျေဒန် ဆန်ချို ၊ မာရီယို ဂေါ့ဇီ တို့ လို အကျော် အမော်တွေ ပေါ်ထွက် ခဲ့တဲ့ ဒေါ့မွန် မှာ မစ်ခီတာရမ် တစ်ယောက် ၃ နှစ် ကစားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီ ၃ နှစ် အတွင်း မှာ ပွဲပေါင်း ၁၄၀ ကျော် ကနေ ၄၁ ဂိုး သွင်းယူပြီး ၄၉ ဂိုး ဖန်တီးပေး နိုင်ခဲ့တာ က ကွင်းလယ် တိုက်စစ် သမား တစ်ယောက် အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်တမ်း တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေ ဟာ အင်္ဂလန် မြေပေါ် အရောက်မှာတော့ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်သွား ခဲ့ပါပြီ ။
၅ ။ ဟော့ခ်
Avenger ရုပ်ရှင် ထဲက လူသန်ကြီး Hulk နဲ့ နာမည်လည်း တူ ၊ ပုံစံလည်း တူ တာကြောင့် လူသိများ ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီး တိုက်စစ်မှုး ဟာ ပေါ်တို အသင်းမှာ လျှမ်းလျှမ်း တောက်ခဲ့ ပါတယ် ။ ပြည်တွင်း အမှတ်ပေး ဖလား ၄ လုံး ၊ ရှုံးထွက် ဖလား ၃ လုံး ၊ ယူရိုပါလိဂ် တို့ ကို ပေါ်တို နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် အတွင်းမှာ ဟော့ခ် တစ်ယောက် အရယူ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါတင် မကသေး ပါဘူး . . . ပေါ်တူဂီ ကလပ် အတွက် ပွဲပေါင်း ၁၆၉ ပွဲ ကစားခဲ့ရာမှာ 77 ဂိုး သွင်းယူ ပြီး ၆၁ ဂိုး အထိ ဖန်တီး နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ၁၃၈ ဂိုး အထိ ပါ၀င် ပတ်သက် ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ ရနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ တကယ် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ Goal/assist ratio ပါပဲ ။ အခုတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ ပေါက်စီတွေ ဖက်ထုပ်တွေ စားရင်း ပျော်မွေ့နေလေရဲ့ . . .